ကလေးတွေနဲ့အတူပင်လယ်ပြင်အားလပ်ရက် - ဤပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုအပန်းဖြေသားအပေါငျးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထုတ်မထငျအထူးသဖြင့်လျှင်, အကြီးမားဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဟိုတယ် - သမုဒ္ဒရာ၏တစ်ဦးခရီးစဉ်မဝယ်ခင်စဉ်းစားရကျိုးနပ်ပထမဦးဆုံးအရာ။
ဟိုတယ်မှာဘန်ဂလိုအတွက်အခန်းတစ်ခန်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်းခဲ့လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောဒစ္စကိုအဖြစ်ဘန်ဂလိုဆူညံသောအရပ်တို့ကိုမဖို့နီးကပ်ဖို့အာရုံစိုက်။ ကလေးသူငယ်အခမယ့်အစားအသံကျယ်သီချင်းနားထောင်၏, ညအချိန်တွင်မအိပ်သင့်ပါတယ်။ တောင်မှသားသမီးရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အချိန်မီပေးဝေရေးနှင့် ပတ်သက်. ထိုနေ့၏အမိန့်ကိုမပြောင်းနိုင်ထားခဲ့ပါ။
တစ်မိသားစုဝတ်စုံငှားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ - ကသီးခြားသေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင်နှင့်အတူအခန်းတခန်းပါပဲ။ သာမန်အခန်းတွင်းငယ်တစ်ခုကလေးနဲ့အတူအပန်းဖြေအိုးလျှော်ရေချိုးခန်းအတွင်းအရောအနှောချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ အခန်းထဲမှာသီးခြားမီးဖိုချောင်, ကတတ်နိုင်သမျှအရောအနှောပြင်ဆင်ထားရန်လုပ်အစားအစာများ, တစ်ဦးအဆင်ပြေပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဟင်းလျာများကိုလျှော်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကဟိုတယ်အငယ်ဆုံးဧည့်သည်အပိုဆောင်းသက်သာခြင်းနှင့်မိသားစုများပေး: အထူးကုလားထိုင်, ရေချိုး, စားခွက်ရထားလမ်း, တွန်းလှည်း။ တိုးသင့်တယ်ဟိုတယ်လိုအပ်ချက်များကို၏ရှေ့မှောက်တွင် Specify ။
သားသမီးတို့အဘို့ Entertainment ကရပ်။ ဒါဟာကလေးတွေအတွက်ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုစနစ်တစ်ခုတီထွင်သောဟိုတယ်များ (အသေးငယ်တဲ့ရေကန်များအတွက်လေးတွေဘို့ရေကိုဆလိုက်) မှသတိထားရမှာကျိုးနပ်သည်။ တချို့ကဟိုတယ်ထိန်းများ၏စောင့်ရှောက်မှုထဲတွင်သူငယ်စွန့်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေး။
Delphine Botanik ဟိုတယ်5* ပြင်ပတွင်သားသမီးရဲ့ရေကူးကန်, ရေဆလိုက်တစ်ခုရုပ်ရှင်ရုံ, အပန်းဖြေပန်းခြံ, သားသမီးရဲ့ကာတွန်း, သားသမီးရဲ့ကစားကွင်း, ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၏သားသမီးတို့အဘို့အတိုးကလပ်အသင်း။ အထူးသားသမီးရဲ့အစားအသောက်ရှိပါတယ်။ တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာ, မြင့်သောကုလားထိုင်, တွန်းလှည်းများနှင့်စားခွက်ကိုပေး။
Pegasos Planet ကိုတော်ဝင်5* နှင့်5* Pegasos Resort ကို။ ဗိုလ်ကြီး Nemo ရဲ့ရဲတိုက် - တစ်ဦးကလေးမြားအတှကျအကွိုကျဆုံးဆွဲဆောင်မှု, Mini-ကလပ်, သားသမီးရဲ့ဒစ္စကို, ကာတွန်း။
ပင်လယ်ဓားပြများသဲသောင်ပြင်များနှင့်ပင်လယ်ဓားပြသဲသောင်ပြင်ကလပ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သူ့ဟာသူအဘို့အပြောတတ် - ဒီဟိုတယ်မှာတစ်စစ်မှန်သောပင်လယ်ဓားပြဝိညာဉျကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာကို, ကာတွန်းအစီအစဉ်များ, ရေးရာပြိုင်ပွဲတစ် Mini-တိရစ္ဆာန်ရုံများအတွက်အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရေးအတွက်။ မှတ်ဉာဏ်အဘို့အဓါတ်ပုံတွေကိုယူဖို့ဆန္ဒရှိနေသောသူ၏ပခုံးပေါ်မှာတစ်ကြက်တူရွေးနှင့်အတူ site ကိုရိုးမ် "စစ်မှန်သော" ပင်လယ်ဓားပြ, တွင်။
Nissi သဲသောင်ပြင် Resort ကို။ အကျိုးစီးပွားများနှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၏ mini-ကလပ်, ကာတွန်း, (တောငျးဆိုခကျြအပျေါ) သားသမီးရဲ့ရေကူးကန်, ကစားကွင်း, ရပ်ဝန်ဆောင်မှု။
ကမ်းခြေ Boscobel Resort & ဂေါက်ကလပ်။ တစ်ဦးကသားသမီးရဲ့ရေကူးကန်, ကလေးများအတွက်ရေကူးကန်, ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများဘို့ရေကိုဆလိုက်, ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ, တင်းနစ်သင်ခန်းစာများ, ကခုန်, ဂေါက်သီး, Mini-တိရစ္ဆာန်ရုံ, သားသမီးရဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးများ, တောင်းဆိုချက်အပေါ်သားသမီးရဲ့ menu ကို - ရပ်ဝန်ဆောင်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေး။
တစ်ဦးကသီးခြားဆောင်ပုဒ် - ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပင်လယ်နက်အပေါ်ကလေးတွေနဲ့အတူအားလပ်ရက်။ ရုရှားဟိုတယ်များမကြာခဏဥရောပကဲ့သို့အဆင်ပြေနေကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မိဘများပင်လယ်မှာကလေးနှင့်အတူအငြိမ့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်သည်ကိုအပိုဆောင်းအသုံးအနှုန်းများကိုဆက်ကပ်။
ဂုဏ်သိက္ခာဟိုတယ် (4 ကြယ်များ)3နှစ်များ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိမမူသောငါတို့အငယ်ဆုံးဧည့်သည်များတက်တာဝန်ခံအခမဲ့သေးငယ်ကလေးများနှင့်အတူမိသားစုများများအတွက်ပေးထားပါတယ်။ သားသမီးတို့အဘို့, ဟိုတယ်မှာသားသမီးရဲ့ကစားကွင်းရှိပါတယ်။
ကလပ်ဟိုတယ်အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင် (f ။ Dzhemete, Anapa) ။ အသက်5နှစ်ကနေကလေးများ: ရေကူး, ငှက်ပျောလှေရှုခင်းများကြည့်ခြင်း, လင်းပိုင်, ရေပန်းခြံ, သားသမီးရဲ့အခန်းပေါင်း။
ပင်လယ်သေ၏အပန်းဖြေစခန်း - မသာရုရှားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးတဦး။ လူအတော်များများဟာပင်လယ်သေမှာသားသမီးများ၏ဆေးကုသမှုသည်ဣသရေလအမျိုးထံသို့လာကြ၏။ သို့သော်မိဘများပင်လယ်သေထဲမှာရေချိုးဖို့အဘယ်အရာကိုကြိုတင် 12 နှစ်အဟောင်းကနေလို့ရပါတယ်သာသားသမီးများသိသင့်! ဣသရေလအမျိုး၌အလွန်ငယ်ရွယ်ကလေးများရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမအပန်းဖြေရှိပါတယ်အဖြစ်, ဘာမှရှိလိမ့်မယ်, နှင့်သားသမီးတို့အဘို့ဖျော်ဖြေရေးထောက်ပံ့ပေးကြသည်မဟုတ်, နှင့်ပင်လယ်မှာ 12 နှစ်အထိသားသမီးများ၏ကုသမှုကိုဆရာဝန်များကခွင့်ပြုမထားပေ။ အတူ
Savonlinna - ဆွဲဆောင်မှုများ
ပဲရစ် Moulin Rouge
နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း "ရို Khutor"
Sharm El ရှိတ် - အဲဂုတ္တုပြည်၌အပန်းဖြေ
သြစတြီးယား, Zell ကြည့်ရှုဖြစ်ကြောင်းကို
အမျိုးသမီးတွေ 2016 ဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခါးပန်းကို
2015 ခုနှစ်တွင် Selena Gomez ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ
ချောကလက်ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့် - စာရွက်
သွားဖုံး၏ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း - အဘယ်အရာကိုအမြဲတမ်းသွားဆရာဝန်ကိုပြောပြကြသည်မဟုတ်လော
1 မှာဘီးတပ်ကုလားထိုင်-Transformer 3
မျိုးဥထွက်မှာ Basal ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်၏ဂရပ်
ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်း Elle မဂ္ဂဇင်းတွေအတွက်အတွင်းခံများနှင့် labutenah ၌ထငျရှား